Ny zavatra jerena ao an-drenivohitr'i Bulgaria, Sofia | Vaovao momba ny dia
Sofia no renivohitr'i Bulgaria, miorina ao amin'ny antsoina hoe Eoropa Atsinanana. Ankehitriny dia mitombo izy io ho toerana mora vidy, satria ny fiainana eto amin'ity tanàna ity dia mora vidy kokoa noho ny renivohitra eropeana hafa, izay misy ifandraisany amin'ny karama ambany sy ny fari-piainana. Betsaka ny orinasa mampitombo an'i Bulgaria noho ny karama ambany, nefa koa misy ifandraisany amin'ny fizahantany izay mirongatra izao.
La Ny tanàna Sofia dia manolotra toerana be dia be hitsidihana, manomboka amin'ny tranombakoka ka hatramin'ny fiangonana manan-tantara na moske. Betsaka ny teboka ahafahanao mankafy ny toeran-tsoa eropeana izay mbola tsy feno olona. Raha mieritreritra ny hanao fialan-tsasatra any amin'ny tanàna eropeana ianao, dia eto ny hevitra mahaliana an'i Sofia.
1 Katedraly Sophia
2 Fiangonana Sveti Georgi
3 Tahiry Serdica
4 Tranombakoky ny tantara any Sofia
5 Katedraly Sveta Nedelya
7 Tsena afovoany
Katedraly ity Alexander Nevsky no iantsoana azy, tempolin'ny ortodoksa, vita tamin'ny 1912. Ity katedraly tsara tarehy ity dia manana domes marobe, izay misongadina, ny sasany amin'izy ireo dia manana loko volamena mivangongo. Ao anatin'ny katedraly dia tsy dia misy jiro loatra, satria ny varavarankely dia mandalo eo am-baravarankely kely lava eo ambanin'ny domes. Ao anatiny ianao dia afaka mahita sary hosodoko tsy tambo isaina amin'ny rindrina sy ao anaty kônda.
Fiangonana Sveti Georgi
Mety tsy hisarika ny saintsika ity fiangonana ity rehefa tonga eo isika, fa raha mandinika ny tantarany isika dia ho fantatsika fa izy no fiangonana tranainy indrindra any Bulgaria, izay manome lanja lehibe azy. Nanomboka tamin'ny andron'ny Fanjakana Romanina izy io. Somary sarotra ny toerana misy azy, satria eo an-tokotanin'ny tranom-panjakana izy io, izay naorina manodidina azy.
Ny tanànan'i Sofia dia miorina amin'ny tanàna taloha an'ny fotoanan'ny Fanjakana Romanina. Amin`izao fotoana izao dia saika tsy misy sisa tavela, fa mbola azo atao ny mahita zavatra efa voaaro. Eo akaikin'ny kianja Nezavisimost dia misy toerana arovana, miaraka amin'ny ampahan'ny làlana romana na ny teatra romana.
Tranombakoky ny tantara any Sofia
Ity tranobe tsara tarehy ity koa dia ao anaty tontolo mahafinaritra, voahodidin'ny zaridaina sy loharano izay misy atmosfera tsara foana. Mahaliana fa ity tranobe ity dia ilay fandroana mineraly taloha izay loharano roa ihany no sisa tavela. Ao amin'ny trano ianao dia afaka mahita zavatra an-jatony izay misy ifandraisany amin'ny tantaran'ny tanànan'i Sofia. Saingy androany dia toerana nofidian'ny ray aman-dreny maro koa izy io, satria manana hetsika ho an'ny ankizy izy ireo. Afaka manatrika fampianarana sy fampianarana isan-karazany ny ankizy raha mankafy ny tranom-bakoka ny ray aman-dreny. Lasa tranombakoka mavitrika tokoa izy io izay manome lanja ny fiarahamonina.
Katedraly Sveta Nedelya
Ity katedraly ity dia eo amin'ny faran'ny Nezavisimost Square ary katedraly ortodoksa Bulgaria. Ny taona nananganana azy dia tsy fantatra amin'ny marimarina, satria koa manana fananganana hafa taty aoriana, saingy tsy isalasalana fa ampahany amin'ny Heritage of this city. Inoana fa mety natsangana tamin'ny taonjato 1925. Tsara homarihina ny fanafihana natao tany 50 mba hamaranana ny fiainan'ny tsar, izay nahatonga azy io saika haorina tanteraka tamin'ny taona XNUMX.
Amin'ny tanàna lehibe rehetra dia misy arabe natokana ho an'ny fiantsenana sy fialamboly. Ao an-tanànan'i Sofia, dia Vitosha Boulevard, làlana mpandeha an-tongotra iray izay ahitanao ireo fivarotana sy trano fisakafoanana isan-karazany. Ity arabe malalaka ity dia mifandray amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny lapan'ny fitsarana. Sehatra fialamboly sy fiantsenana izy io.
Ny tsena afovoan'ny tanàna mitondra misokatra hatramin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX. Izy io dia tranobe neo-renaissance tsara tarehy miaraka amina tilikambo famantaranandro. Ny ao anatiny dia tsy karakaraina firy, fa ny marina dia iray amin'ireo toerana tena izy ao an-tanàna iray izay tokony hovangianao izany, mba hahitanao ireo zavatra izay mihoatra ny mpizahatany. Amin'ity tsena ity dia azonao atao ny mamakivaky ny gorodona telo mijery ny fahabetsahan'ny fiantsenana isan'andro ary mankafy ny hanitra sy ny tsiro ny vokatra Bulgaria.
Saika ny tanàna rehetra dia misy zaridaina lehibe mamela ny fianakaviana hankafy tontolo andro any ivelany. Raha toa ka Sofia ity valan-javaboary manan-tantara ity dia an'ny Borisova Gradina. Sehatra maitso lehibe ahafahanao mandeha am-pahanginana hahita ny toerana mahaliana azy sasany, toy ny Puente de las águilas, efitrano malalaky ny toerana malalaka izay anaovana hetsika, toerana filalaovana ankizy ary eny amin'ny farihy Ariana aza. Ity dia valan-javaboary manan-tantara izay naorin'ny baikon'i Tsar Boris III.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Sofia » Inona no ho hita ao Sofia
Ny lapa tsara tarehy indrindra any Espana
Fushimi Inari, tempolin'ny vavahady arivo